Aktarka Reer Maraykan Ee Lagu Naanayso Netflix (Adam Sandler) Oo Filimo Hor Leh Ku Baahin Doona Internet-ka | Hawraar
October 5, 2014 Xiisaha/Xulashada No comments
Aktarka Reer Maraykan Ee Lagu Naanayso Netflix (Adam Sandler) Oo Filimo Hor Leh Ku Baahin Doona Internet-ka
Aktarka wayn ee reer Maraykan Adam Sandler, warbaahinta iyo bahda filimaduna ku naanaysaan, Netflix ayaa shaaca ka qaaday in afar filim oo cusub, uu dhawaan ku baahin doono shabakada internet-ka, dunida, kuwaas oo sida la filayo ilaa konton milyan oo qof dawashadooda diyaar u yihiin.
Jilaaga Adam Sandler, oo aad ugu caan baxay filimada internet-ka laga daawado, waxa uu leeyahay ilaa konton milyan oo ku xidhan ama sida luuqada Internet-ka haddii loo dhigo, (50-Milyan Oo User), kuwaas oo dunida daafaheeda ku kala nool.
Adam Sandler oo 48-jir ah, waxa uu hore sanadkan oo kaliya u soo saaray filimo kala duwan, kuwaas oo u badan maadays iyo majaajilooyin, waxaana ka mid ah, kuwooda ugu xiisaha badnaa, (That’s My Boy iyo Jack and Jill).
Adam Sandler ayaa heshiis la saxeexday shirkad baahinta filimada qaabilsan oo Maraykan ah, taas oo lagu magacaabo, Ted Sarandos, waxaana sida bayaan ay shirkadu soo saartay lagu sheegay, in filimadani noqon doonan kuwo mustaqbalka dhow iyo ka dheer labadaba loo qorsheeyay.
Aktarkan ayaa liiska iibsiga filimada ee Box Office kaga jira kaalinta sideed iyo tobnaad waxaana dakhliga uga soo hoyday, $3 billion oo dollar, sidoo kale liiska hormoodka aktarada Hollywood ayuu kaga jiraa kaalinta sideed iyo lixdanaad.